Iindaba - Izisombululo zezakhiwo
Ukunyuka - umngcipheko ongathathelwa ntweni
Ukunyuka kuyingozi engaphantsi. Ezi mpembelelo zombane (okwexeshana) ezithatha isahlulo sesibini kuphela zibangelwa kukuhlasela ngokuthe ngqo, okufuphi kunye nokude kombane okanye ukutshintshela ukusebenza kwesixhobo samandla.
Ukubetha ngokuthe ngqo nakufutshane
Uqhankqalazo oluthe ngqo okanye olukufuphi ngumbane ohlasela isakhiwo, kufutshane okanye kwimigca engena kwisakhiwo (umz. Inkqubo yombane ophantsi, unxibelelwano ngomnxeba kunye neendlela zedatha). Umthamo wamandla kunye nomxholo wamandla okubangelwa yimisinga yempembelelo kunye nokunyanzeliswa kwe-voltages kunye ne-electromagnetic field (LEMP) eyoyikisa inkqubo ukuba ikhuselwe.
Umbane okhoyo ngoku osuka ngqo kwisitrayikhi sombane esiya kwisakhiwo ubangela ukunyuka kwamandla e-volts ali-100,000 kuzo zonke izixhobo zomhlaba. Ukudibana kubangelwa kukuhla kwamandla ombane kwimeko yesiqhelo yomhlaba kunye nesiphumo esinokubakho sokwakha ngokubhekisele kwindalo esingqongileyo. Olu lolona xinzelelo luphezulu kwiinkqubo zombane kwizakhiwo.
Ukongeza kwithontsi lamandla ombane kwimeko yesiqhelo yomhlaba, i-surges zenzeka kufakelo lombane lwesakhiwo nakwiinkqubo ezixhumeneyo nezixhobo ngenxa yesiphumo sokungeniswa kombane wombane. Amandla ala ma-surges anyanzelisiweyo kunye neempembelelo zempembelelo zomoya ziphantsi kunaleyo yombane othe ngqo oshukumisayo wangoku.
Ukubetha kombane okude
Ukubetha kombane okukude yimibane ebetha kude kude nento eza kukhuselwa, kuthungelwano olusezantsi lwamandla ombane okanye kufutshane nokusondela kwilifu ukuya kwilifu.
Ukutshintsha ukusebenza kwezinto zombane kubangela i-surges (SEMP -Ukutshintsha i-Electromagnetic Pulse) yee-volts ezili-1 000 kwiinkqubo zombane. Zenzeka, umzekelo, xa imithwalo enganyanzelekanga (umz. Isiguquli, izixhobo zombane, iimoto) zicinyiwe, iiarcs ziyatshiswa okanye zifakela uhambo. Ukuba unikezelo lwamandla kunye nolayini wedatha zifakwe ngokuhambelana, iinkqubo ezibuthathaka zinokuphazanyiswa okanye zitshatyalaliswe.
Ukukhuselwa konikezelo lwamandla kunye neenkqubo zedatha
Ukudilika okwonakalisayo kwizakhiwo zokuhlala, iofisi kunye nolawulo kunye nezityalo zorhwebo kunokwenzeka ukuba zenzeke, umzekelo, inkqubo yokuhambisa umbane, inkqubo yetekhnoloji yolwazi kunye nenkqubo yemfonomfono, iinkqubo zolawulo lwezixhobo zemveliso ngebhasi yentsimi kunye nabalawuli bomoya opholileyo okanye iinkqubo zokukhanyisa . Ezi nkqubo zinovakalelo zinokukhuselwa kuphela ngumbono wokukhusela obanzi. Kule meko, ukusetyenziswa okulungelelanisiweyo kwezixhobo zokukhusela (umbane ngoku kunye nokubanjwa kwabahambi) kubaluleke kakhulu.
Umsebenzi wombane obambayo ngoku kukhupha amandla aphezulu ngaphandle kokutshatyalaliswa. Zifakwe kufutshane kangangoko apho inkqubo yombane ingena kwisakhiwo. Ukunyuka kwababanjiweyo, bona, bakhusela izixhobo zokuphela. Zifakwe kufutshane nezixhobo eziza kukhuselwa.
Ngosapho lwemveliso ebomvu / yomgca osetyenziselwa iinkqubo zonikezelo lwamandla kunye nemveliso yosapho emthubi / yomgca kwiinkqubo zedatha, i-THOR inikezela ngezixhobo zokukhusela ezihambelanayo. Ipotifoliyo yemodyuli ivumela ukuphunyezwa kweendleko zokukhusela iikhonsepthi zazo zonke iintlobo zokwakha kunye nobungakanani bokufakwa.